ဟယ်လို ... ဟုတ်ကဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါ့မယ်..(15.5.2015) - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Mobile Tutorials ဟယ်လို ... ဟုတ်ကဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါ့မယ်..(15.5.2015)
ဟယ်လို ... ဟုတ်ကဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါ့မယ်..(15.5.2015)
Thiha Htike at 8:45:00 PM Mobile Tutorials,
ကျွန်တော်ပို့စ်တွေမရေးဖြစ်တာ ကြာသလိုလိုဖြစ်နေပြီ ကွက်တိကွက်ကြားဖြစ်နေပြီ Why?
အကြောင်းအမျိူးမျိူးကြောင့်...
ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒိအလုပ်ပိနေတဲ့ကြားမှ အဆင်ပြေပြေ ပို့စ်တွေကို တင်ဖြစ်အောင်တင်ပေးပါတယ် ကျွန်တော့် ပို့စ်တင်ချိန်က မနက်4နာရီမှ5ခွဲထိပေါ့ 30 minu ကိုတော့ FB ပေါ်မှာ မေးထားတာလေးတွေဖြေတယ် Total=2 hour ပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ပါ ကျွန်တော် ညအလုပ်ပိလို့မထနိုင်ရင် ည7to9hour တင်ပေးပါတယ်ခင်ဗျ ကျွန်တော် အဲ့အချိန်အလုပ်မအားသေးပါဘူး ည9 hour မှဆိုင်သိမ်းတာပါ သို့ပေမဲ့ ည ကို မအ်ိပ်တော့ဘူးလေ အိပ်ချိန်မှာ လုပ်စရာရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်လိုက်ပါတယ် အခု ဒါတွေဘာလို့တင်ပြရသလဲဆိုတော့ ပို့စ်တွေကို အချန်နဲ့တပြေးညီ မနက်တိုင်းမတင်နိုင်တာ အပေါ်ကကြောင့်ပါလို့ နားလည်ပေးစေချင်လို့ တင်ပေးထားတာပါ...
ဟုတ်ကဲ့ သီဟထိုက်ကိုမေးထားသော ပို့စ်များ တင်ပေးလိုက်ပါပြီ...
Facebook မှာ Page ထောင်ထားသူတွေအတွက်
-ရှင်းလင်း​​သေသပ်​လှပတဲ့user interface နဲ့အတူ
-Apk file size 19.13MB ရှိပြီး
-Android OS Version 2.3နှင့်​အထက်​ရှိတဲ့
Facebook ဖွင့်ချင်နေသူတွေအတွက်(Very Easy)
Facebook acc ဖွင့်ရန် Mail တစ်ခုခုလို
အပ်ပါတယ် ။ ကျနော် အခု Facebook
acc ကို Gmail နဲ့ ဖွင့်မှာပါ ။ Gmail မရှိတဲ့
မဖွင့်တက်တဲ့ သူများ Gmail ဖွင့်နည်းကို >>> ဒီမှာ <<< ကြည့်ပါ ။
ကဲ Gmail acc ရှိတဲ့သူများ စရအောင်
-ပထမဦးဆုံး www.facebook.com ကို
Create New Account ကိုနှိပ်ပါ ။
-ပြီးလျှင် First name , Surname ( Last
name ) ထည့်ပါ ဥပမာ ( First Name -
Ko , Surname[Last Name] - Minn )
-ပြီးလျှင် Email Address or Phone
Number နေရာတွင် Gmail acc ထည့်ပါ။
( ဥပမာ - kominnitshare@gmail.com )
-Gender ရွေးပါ ။
-Birthday ထည့်ပါ ။
-Password ထည့်ပါ ။
-SignUp လုပ်ပါ ။
ပြီးလျှင် Comfirm Code တောင်းပါမည်
Browser ကို အာ့ဒီ့အတိုင်းထားပါ
Gmail ထဲကိုသွားပါ Facebook မှ
Message ပို့ ထားပါလိမ့်မည် ။
-Message ထဲမှကုဒ်ကို Copy ကူး၍
ခုနက Facebook တွင် Comfirm
Code တောင်းတဲ့ နေရာမှာ ဖြည့်ပါ
Comfirm လုပ်ပါ ။ Facebook Acc
ထဲသို့ ရောက်သွားပြီ ဖြစ်ပါသည် ။
-အကယ်၍ SignUp ကိုနှိပ်လိုက်သော
အခါ Comfirm Code မတောင်းဘူးဆို
လျှင်လဲ Gmail ထဲသွားပါ ။ Facebook
မှ ပို့ ထားသော Message ထဲဝင်ပါ
Comfirm ဆိုသည့် အပြာရောင်အတန်းကို
ကိုနှိပ်ပါ ။ Facebook log in page
သို့ ရောက်လာပါမယ် ။ Log in လုပ်လိုက်
သောအခါ Comfirm လုပ်ပီးသား ဖြစ်သွား
ပါလိမ့် မည် ။
-အခုနောက်ပိုင်း Facebook ဖွင့်ရာတွင်
ထိုအခါ စိတ်မပျက်ပါနှင့် Ooredoo နှင့်
Telenor နှစ်ကဒ်ထဲ မှ တစ်ကဒ် ရှိလျှင်
အာ့လော့ကို ခေါင်းခေါက်ပီး နင်လားဟဲ့
လော့လို့ မေးလို့ ရပါပြီ ။ ခ်ခ် ။
ကဲ Facebook acc အသစ်ဖွင့်တာကို
Sign Up လုပ်လိုက်တော့
Verify ဆိုပြီး တက်လာမယ်
ပြီး လျှင် မြန်မာကိုရွေးပါ
ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပါ Telenor သို့Ooredoo
ပြီး လျှင် Continue ကိုနှိပ်ပါ
ပြီးလျှင် ပေါ်လာသော Page တွင်
Friend ကို Only Me လို့Change ပြီး
Save လုပ်ပါ ပြီးလျှင် Ok ပါပြီ ။ ။
Facebook မှာ Like Hack ချင်သူတွေအတွက်
Like hack မယ်ဆိုရင်တော့ ပထမဆုံးအနေနဲ့ Login ဝင်ထားရမှာပါ။ ဒီနေရာမှ Login ဝင်နိုင်ပါတယ်.... account ကို Login ဝင်ပြီးရင်... setting ကိုဝင်လိုက်ပါ.... setting ကိုနဲနဲလေးပြင်ရပါမယ်ခင်ဗျာ............ အောက်ကပုံအတိုင်းပေါ့... setting က follower ကိုဝင်ပါ ပြီးရင် Friend လို့ ပေါ်နေတဲ့နေရာကို Everybody လို့ပြောင်းလိုက်ပါ.... ဒုတိယအနေနဲ့ ဒီနေရာကို သွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...... ပြီးရင် အောက်က ပုံတွေအတိုင်း ဆက်လုပ်လိုက်ပါ ခင်ဗျာ.......... အနီရောင်လေးနဲ့ရေးထားတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ပြိးရင် ခဏစောင့်လိုက်ပါ new tab ကို ဝင်လိုက်ပါ .. ပြီးရင် ငါးစက္ကန့် စောင့်လိုက်ပါခင်ဗျာ...... အောက်မှာပုံတွေအတိုင်းဘဲပေါ့...... ငါးစက္ကန့်စောင့်ပြီးရင် နှိပ်လိုက်ပါ new window ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်........... ပေါ်လာရင် ခဏစောင့်ပြီး ပေါ်လာတဲ့ new window ကိုပိတ်လိုက်ပါ ဒီနေရာမှာ ထပ်လုပ်ပါမယ်.... အဲဒီမှာ facebook account login ဝင်နေပါလိမ့်မယ်... ဘာပေါ်လာလာ OK ဘဲ နှိပ်ပေးလိုက်ပါ...... အောက်မှာပုံတွေအတိုင်းဘဲပေါ့...... ဝင်ပြီးသွားရင် အောက်ကပုံလေးတွေကိုဆက်ကြည့်လိုက်ပါ....... copy ကူးယူလာတဲ့ link ကို ကျန်ခဲ့တဲ့ နေရာကိုပြန်သွားလိုက်ပါ.......... ပြီးရင် ကူးယူလာတဲ့ link ကို အောက်ကပုံအတိုင်း ထည့်ပြီး အစိမ်းရောင်နေရာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ ခင်ဗျာ.............. ခဏလေးစောင့်လိုက်ပါ.............အောက်ဆုံးမှာ ကျနော် အဝိုင်းလေးနဲ့ ပြထားပါတယ်.... status ID ဒါမှ မဟုတ် photo ID ကို အစားထိုးပေးရမှာပါ........ အစားထိုးပေးပြီးရင်..... အောက်က အပြာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ ပြီးရင် စောင့်နေပေးလိုက်ပါ........ မပိတ်လိုက်ပါနဲ့... ဒီအတိုင်းလေးဘဲ သူ loading ပြီးတဲ့ အချိန်ထါထားပေးပါ facebook ကိုသွားကြည့်လို့ရပါတယ်..... like တွေတက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်....... မှတ်ချက်အနေနဲ့ Facebook Status (or) photo ID ကိုတော့ သိလိုရင် ကို like hack လိုတဲ့ status (or ) photo ရဲ့ ကြာချိန် ကို နှိပ်လိုက်ပါ။။ ဒီနေရာမှာ တင်ထားတဲ့ post ရဲ့အောက်က time ဝကယချိန်ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ID ကို အောက်မှာ ပုံ တစ်ပုံနဲ့ ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ.... အခုဆိုရင် facebook like hack ခြင်းကို အလွယ်တစ်ကူ ပြီးင်္ဆုးသွားပါပြီ ခင်ဗျာ........
ဖုန်းနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့New windowကိုနှိပ်ပါ၊Computerဆိုရင်တော့openanew tabကိုရှာဖွေနှိပ်ပါ။
Facebook မှာ ကိုယ့် Timeline ကို ဘယ်သူဝင်ကြည့်လဲသိချင်ရင်
CoC game ကို Myanmar Font ပေါ်ချင်သူအတွက်
င်္ဒီ apk ရဲ့ အထူးအားသာချက်ကတော့
နေရာတိုင်းမြန်မာစာ ရှေ့နောက်မလွဲစေရန် FEPFZ method ထည့်ထားခြင်း
USER မှ ဘာမှရွေးချယ်ပေးစရာမလိုပဲ
1 Click 1 Button ဖြင့်သာ သုံး၇န်လိုအပ်ပီး ကျန်တာအားလုံး ကျနော့် ဘက်မှတာဝန်ယူ
သတင်းခေါင်းစဉ်များ ဖေ့ဘုတ်မြန်မာနာမည်များ COC Game များက အစ မြင်ရအောင်လုပ်ထားပေးခြင်း
Original font restore ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း
What is New : v1.3
OS : Android 2.3 and Above
Update : 29.11.2014
MPPG Font Tool 1.3.apk : 6.95 Mb
ios History ကို သိချင်သူအတွက်
﻿ယ﻿နေ့ခေတ် နည်းပညာမြင့် ပစ္စည်းများတွင် လူကြိုက် အများဆုံး ပစ္စည်းမှာ iPhone များပင် ဖြစ်သည်။ iPhone အ﻿ကြောင်း မ
﻿ပြောခင် Apple နှင့် iPhone များစတင် ဖြစ်ပေါ် လာပုံကို သိရှိရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
Apple ကို ၁၉၇၆ ခုနှစ် ဧပြီ ၁ ရက်တွင် Steve Jobs, Steve Wozniak နှင့် Ronald Wayne တို့က တစ်ကိုယ်ရေသုံး Apple I ကွန်ပျူတာ များကို ရောင်းချရန် တည်ထောင်﻿ခဲ့သည်။ထိုကွန်ပျူတာများသည် Wozniak မှ တီထွင် ထားသော လက်လုပ် ကွန်ပျူတာ လေးများ ဖြစ်ပြီး Homebrew Computer Club တွင် ပထမ ဦးဆုံး ပြသခဲ့သည်။ Apple I ကို mother board တစ်ခုအဖြစ် (CPU, RAM, taxtual-video chips) တို့ပါဝင် ရောင်းချ ခဲ့သော်လည်း ယခုလက်ရှိ တွေ့မြင် နေရသော ကွန်ပျူတာ တစ်စုံစာ အပြည့်အစုံ မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ထိုကွန်ပျူတာ အမျိုးအစားကို ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင် ဒေါ်လာ ၆၆၆ ဒသမ ၆၆ (ယခုပေါက်ဈေး ဒေါ်လာ ၂၇၂၃) နှင့် ရောင်းချခဲ့သည်။၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဇွန်လ ၉ ရက်တွင် ကျင်းပသော ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရ ကွန်ပျူတာ ပညာရှင်﻿များ ညီလာခံ (WWDC) တွင် iPhone 3G ကို စတင် မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁၁ ရက်တွင် လျှော့ဈေး ဒေါ်လာ ၁၉၉ ဖြင့် 8GB version ကိုလည်းကောင်း၊ ဒေါ်လာ ၂၉၉ ဖြင့် 16GB version ကို လည်းကောင်း စတင် ဖြန့်ဖြူးခဲ့သည်။ ထို version မှ 3G network ကိုလုပ် ဆောင် ပေးနိုင်ပြီး GPS လည်းပါဝင်သည်။၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ် ဇွန်လ ၇ ရက်တွင် ပြုလုပ်သော WWDC တွင်လည်း iPhone4ကို ထပ်မံ မိတ်ဆက်ပြန်သည်။ "iPhone4ဟာ ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီက ထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် မော်ဒယ် များတစ်လျှောက်တွင် အကြီးမား ဆုံး ခြေလှမ်း ဖြစ်ပါတယ်''ဟု Apple ကုမ္ပဏီမှ ပြောကြားခဲ့ သည်။ ထိုဖုန်းတွင် အသစ် အသစ်သော ဒီဇိုင်းများ ဖြင့်သာ ပြုလုပ်ထားပြီး ကျယ်ပြန့်သော မျက်နှာပြင်၊ ပိုမို ကောင်းမွန်သော ဂိမ်းစနစ်၊ flash ပါသော5megapixel camera ၊ ကိုယ့်ပုံ ကိုယ်ပြန် ရိုက်နိုင်သော VGA camera နှင့် Face Time Video ဖုန်းခေါ် စနစ်တို့ ပါဝင်သည်။ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၄ ရက် တွင်
iPhone 4s ကို ပြောင်းလဲ ထုတ်လုပ်ပြန်သည်။ A5 processor သို့ ပြောင်းလဲ အသုံးပြုခြင်း၊ အမေရိကားတွင် အသုံးပြုသော AT&T နှင့် Verizo Wireless ကို ချိတ်ဆက် အသုံးပြု နိုင်ရန် စီစဉ် ထားခြင်းများကို အသစ် ထည့်သွင်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ယခု နောက်ဆုံး ထွက်﻿ရှိ﻿သော iPhone5ကို ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် စက်တင် ဘာ၁၂ ရက်တွင် စတင် ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ထိုဖုန်းတွင် လေးလက်မ display screen ကို တပ်ဆင်﻿ထားသည်။
4G ဆက်သွယ်မှု စနစ်ကို သုံးထားသည်။ processor A6 ကို ပြောင်းလဲ တပ်ဆင်ထားသည်။ ကောင်းမွန်သော အရည်အသွေး များကြောင့် ပထမဦးဆုံး နေ့မှာပင် အလုံး နှစ်သောင်းခန့် လျင်မြန်စွာ ရောင်းထွက်သွားပြီး ကြိုတင်မှာယူ မှုများကြောင့် သုံးရက်အတွင်း ငါးသောင်းခန့် ရောင်းထွက် သွားသည်။ မြန်မာ နိုင်ငံ၌ iPhone သုံးစွဲသူ အနည်းငယ် မျှသာရှိသည်။ iPhone မှာ ဈေးကြီးပေး ဝယ်ယူ ရပြီး ဂိမ်းအတွက် ဆော့ဖ်ဝဲများကို တန်ဖိုးကြီး ပေးရသည်။ ထို့ပြင် မြန်မာ နိုင်ငံ၌ တရားဝင် ခန့်အပ်ထားသည့် အရောင်း ကိုယ်စားလှယ် မရှိခြင်းကြောင့် ပြင်ဆင် ထိန်းသိမ်းရာတွင် အခက်အခဲ များနှင့် ကြုံတွေ့ နေရ ခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
P5100 IMEI Null Earror မေးထားသူအတွက်
ဒီတစ်ခေါက် ကတော့ ဟတ်ဝဲ နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဟာတော့ မဟုတ်ပါဘူး
Samsaung Phone တွေ အတွက် Firmware အမြင့် တင်မိသော် လည်းကောင်း အနိမ့် ဆင်းမိသော်
လည်;ကောင်း IMEI ပြသနာတွေကို One Click နဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး တင်ပေးတာပါ။
အဲ့ဒီ tool လေးကတော့ Samsaung Remote Client လို့ ခေါ်တဲ့ tool လေးဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီ Tool ကို သုံးမယ် ဆိုရင်တော့ အင်တာနက် ရှိဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။
ပြီးရင် connect နှိပ်လိုက်ပါ
ပြီးရင်ဖုန်းကို ပါဝါဖွင့် လိုက်ပါ
ကြိုးထိုးလိုက်ပါ ဖုန်းရဲ့ မော်ဒန် အမျိုးအစား ရွေးချယ်ပါ
ပြီးရင် Baseband repair Tool ထဲဝင်ပါ
repair method3မျိုး ရှိပါတယ် အဲ့သုံးမျိုးနဲ့ ပြင်ကြည့်ပါ တော်ရုံဆို ပြင်လို့ ရပါတယ်
အောက်မှာ EFS Store လို့ ရတယ် Restore လဲ လုပ်လို့ ရပါတယ်
G610 Emergemcy Call Earror
ဒီ Earror ကတော့ ကျွန်တော့်ကို ဖုန်းပြန်ဆက်ပါအုံး...
အခုဒီပို့စ်ကိုကြည့်နေသူလည်းကျွန်တော်ကျွန်တော် "သီဟထိုက် "၏ဆရာပါ :D
ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ မည်သည့်ငွေဖြည့်ကဒ်မဆိုပေးပို့ပြီး ကူညီနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ..
ခေါင်းစဉ် တပ်မရတဲ့ ရောဂါ
မြန်မာစာ မြန်မာဖောက် ပြုပြင်ချင်သူများအတွက်
Xiaomi Mi4i Root Tool ( x86 x64 )
Bombsquad game လေးပါ
ဖုန်းထဲမှာ စာအုပ်ဖတ်ရူရန် လို့အပ်တဲ့-Adobe Acrobat...
ဇွန်လမှစတင်၍ အခွန်ပေးငွေ ဖြတ်တောက်ထားသည့် ငွေဖြည့်...
မျိုးကြီး ရဲ့ မင်းရှိတဲ့မြို့ mp3 ဒေါင်းလုတ်လင့် အ...
computerကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက် language လေ့လာ...
Android 5.0, 5.0.1 တွေတောင် Root နိုင်ပြီဆိုတဲ့ VR...
Just the Knowledgeပေါ့ ... (15.5.2015)
မှတ်ချက်။ ။ ဤကဗျာများသည် ၂၁ရာစုများဖြစ်သည်...(15.5...
ပျောက်သွား၊ ပျက်သွား၊ ဖျက်မိသွားတဲ့ Data တွေပြန်ယူ...
ကိုယ့်ဓါတ်ပုံမှာ တက်တူး အမိုက်လေးတွေ ထိုးရအောင် . ...
Huawei G620-L72 Myanmar Font Installer
Windows 10 က Microsoft Windows operating system ၏ ...
ပုသိမ်မြို့မှာ စီးပွားရေလုပ်ငန်းကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ ...
computer မှာ မြန်မာဖောင့်ပျောက်နေလျင်ဒါကို install...
Huawei G7-TL00 Official Firmware B261
Huawei Honor Play 4C ( CHM-CL00 ) Official Firmwar...
Huaei P7-L07 Official Firmware B615
Huawei P7-L09 Official Firmware B615
Honor 3C 1G ( H30-T00 ) Official Firmware B265
Honor 3C 2G ( H30-T10 ) Official Firmware B265
Honor 3C 2G ( H30-U10) Official Firmware B266
စာအုပ်တွေကို စာကြည့်တိုက်လိုထားမယ်, Reader အတွက်သံ...
ဖုန်းထဲကapk တွေကို computer ပေါ်မှာ install လုပ်သုံ...
Honor Play4( G621-TL00 ) Official Firmware B262
Android OS နှင့် Tablet တွေမှာ စာဖတ်ရန် အခက်ခဲ့ဖြစ...
Handset အမျိုးပေါင်းတစ်ရာကျော်ကို Root ဖောက်ပြထားေ...
Sony Xperia Z series အားလုံးအတွက် Android 5.0.2 Lo...
IObit Uninstaller 4.3.0.122 Free
Sony Bootloader Unlocking Video
MPPG MTK IMEI Write Tool
Corel AfterShot Pro v2.2.0.29 Full
Xiaomi_HM Note_1S CT_6.3.8.0_< ကြောင်မြီး ရီကာဗာရီ...